Banyere Anyị - Chao YU Machinery Co., Ltd
Xiangshan Chaoyu Machinery Manufacturing Co., Ltd. emi odude ke otu nke mba n'elu 100 ógbè dị na Zhejiang Province Xiangshan County Industrial Park, Xiangshan dịịrị banye na mmiri bụ a mara mma nke ukwuu obodo. Ọ uko na Hangyong okporo ụzọ a na-agbazi, ụgbọ njem bụ nnọọ adaba.
Ugbu a, ụlọ ọrụ na-ekpuchi ebe nke elu 1 nde square mita. Na elu mmepụta akụrụngwa. Mgbe na-adịbeghị anya, na-aga n'ihu mmepe na mmepe, na-akpụ a set nke ọhụrụ ngwaahịa mmepe mmepụta edoghi na-arụ ọrụ na ike sales netwọk na otu nke pụrụ iche na mmepụta isi kabinet.
The ụlọ ọrụ nwere ike oru ike, zuru ezu n'ibu nhazi akụrụngwa, ngwaahịa mma, mgbe-sales na ọrụ dị ka ISO9000 mba ụkpụrụ management, na-enye ndị ahịa na àgwà ngwaahịa na ọrụ. N'otu oge ahụ, ụlọ ọrụ na-elekwasị anya na technology mma na ọhụrụ ngwaahịa mmepe, nke mere na ngwaahịa na-eduga ọnọdụ na njem.
Company ga-magburu onwe ya mma, ọnụ price na echiche ọrụ dị ka azụmahịa nzube. Na nke a, ụlọ ọrụ niile ọrụ nke ụlọ ọrụ na-elekọta ma na-akwado m ụlọ ọrụ ndị ahịa na ndị ọrụ ibe na-egosipụta ekele m sitere n'obi!